यसरी भाँडिएको थियो युवराज दिपेन्द्रको विवाह
राजाले अलि गम्भीर भएर भन्नुभयो, ‘यसमा उपाय के छ त ?’ ‘अंगरक्षकहरु पनि उस्तै उमेरका छन, युवराजलाई के गर्दा खुसी बनाउन सकिन्छ, त्यही गर्छ्न, त्यही गर्ने छन् । कुनै नहुने कुरा भएपछि यो गर्नु हुँदैन भन्ने कोही छैन । त्यसकारण ती युवक अंगरक्षकमाथि उमेर पुगेको कमान्डर राखिबक्सनुपर्यो । उसले ती अंगरक्षकहरुलाई नियन्त्रणमा राख्छ । युवराजधिराजलाई केही अदब हुन्छ, सीमाभित्र राख्न चाँडै विवाह गरिबक्सनुपर्छ । मत्ता हाती मद चढेको बेला ढोई (पोथी हात्ती) सँग लागे मात्र शान्त हुन्छ, नत्र बहुलाउँछ । प्रकृतिको नियम नै हो, महिलाहरुले पुरुषलाई बशमा राख्छन् । नीतिशास्त्रले त्यही भन्छ’, मैले जाहेर गरेँ ।
‘सरकारको विवाह भोज कहिले खान पाइएला भनी कर्मचारीहरु भन्छन् । बाहिर जनता पनि अब त सरकारको चाँडै विहे भए हुन्थ्यो भन्छ्न’, मैले भनेँ ।
मैले भनेँ, ‘म नोकरीबाट अवकाश भए पनि यस्तै निम्ता पाए हाजिर हुन्छु ।’ युवराज अरु बोल्नुएन । घर फर्किंदा बाटोभरि विचार गरेँ, ‘किन त्यस्तो भन्नुभएको ?’ मैले भेटेपिच्छे जस्तो उहाँको विहेको कुरा गरेकाले होला भन्ने ठानेँ । पछि यस विषयमा चाख लिएर बुझेँ ।
श्री ५ युवराजधिराजको विवाह गर्ने भनेर २०४९ सालमा जिज्यूमुमा रत्नको नाता पर्ने रथी प्रदीपविक्रमकी छोरी सुप्रिया शाहको कुरा चलेको थियो । उनलाई दरबारको चालचलन र व्यवहार सिकाउन जिज्यूमुमापट्टि नै राखिएको थियो । युवराज दीपेन्द्रलाई पनि मन परेको थियो रे । त्यसैले सुप्रिया शाहको पूर्ण कदको ठूलो तस्वीर त्रिभवन सदनको दीपेन्द्रको मास्टर बेडरुममा रहेको थियो ।
मुमा बडामहारानी ऐश्वर्यबाट भने सासूको नाता पर्ने हुँदा ती विहे गर्ने भनेकी केटी हुँदैन भन्ने रहेछ । इन्टेरियर डेकोरेसन त्रिपुरेश्वरले बनाएको मास्टर बेड रुमको पलंगमाथि सजाएर राखेको सो फोटो मुमा ऐश्वर्य त्रिभुवन सदन आएको थाहा पाउनासाथ दीपेन्दले लुकाउने गरेको कुरा बैंठकेबाट थाहा पाएको थिएँ । सासु–बुहारीको विवादका कारण सुप्रियासँग विवाह नहुने भनी दरबारबाट फर्काइएछ ।
त्यसैले दीपेन्द्रबाट मलाई विवाहको भोज खान पाउँदैनौ भनेको मैले बुझेँ । त्यसपछि पशुपतिशम्शेरकी छोरी देवयानीसँग विहेको कुरा चलेको थियो । त्यसैबेला नेपालका खेलाडीहरु अन्तर्रा्ष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिन विदेश गए ।
खेलकुदका सरक्षक युवराज दीपेन्द्र पनि खेलाडी युवाका प्रियपात्र भएकाले सो खेल हेर्न विदेश जानुभयो । देवयानी पनि सो खेल हेर्न गएको बेला भेट भयो रे । युवराज दीपेन्द्र र देवयानी राणामा घनिष्ठता रहेको थियो । त्यसमा पनि बडामहारानीले विरोध गरेर विहा नहुने भएछ । युवराजको विवाहको तयारीलाई पनि समय चाहिने हुँदा धेरै अगाडि थाहा पाइन्छ । त्यस्तो केही थिएन । अंगरक्षक कर्नेल सुन्दरप्रताप राना भन्छन्, दीपेन्द्रले भन्नुभयो, ‘हेर न सुन्दर, मेरो त विहे नै नहोला जस्तो भयो, बुबाहरु मानिबक्सेको छैन ।’ त्यसपछि दरबार हत्याकाण्डले गर्दा उहाँको विहे हुनै पाएन । कारणबिना कार्य हुँदैन । त्यत्रो ठूलो घटना हुन ठूलै कारण हुनुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा थियो ।
राजदरबारका पूर्वप्रमुख सचिव रेवतीरमण खनालको पुस्तक ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’बाट साभार
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०९, २०७४१८:२५
मूलधार राजनीति र सत्ताखेलमा रेशम चौधरी प्रकरणको भूकम्प ! संविधान माथिनै प्रहार ??
“पापीले रक्ताम्मे हुँदा पनिे छाडेन आमा”
नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नेताज्यु छड्के सलाम तिमीलाई । गजल
२२ सेकेन्ड अगाडि बिगुल